Izindatshana zikaRyan Crozier zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge URyan Crozier
URyan Crozier ungumsunguli we I-Agency Boon, i-ejensi yezentengiso yedijithali egxile ekusizeni abantu benze okuhle online. Uneminyaka engu-15 + enolwazi lokumaketha futhi usize amabhizinisi amaningi ukusebenzisa uhlaka lweStoryBrand ekumaketheni kwawo.
Ungayisetha Kanjani Umhubhe Olula Wokuthengisa We-5-Isinyathelo ku-inthanethi
NgoLwesine, Juni 25, 2020 NgoLwesine, Juni 25, 2020 URyan Crozier
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, amabhizinisi amaningi ashintshele ekumaketheni online ngenxa ye-COVID-19. Lokhu kushiye izinhlangano eziningi kanye namabhizinisi amancane bematasa befuna izindlela ezisebenzayo zokumaketha ezidijithali, ikakhulukazi lezo zinkampani ezithembele kakhulu ekuthengiseni ezitolo zazo zezitini nodaka. Ngenkathi izindawo zokudlela, izitolo ezidayisa ezitolo, nabanye abaningi sebeqala ukuvula futhi, isifundo osifunde ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sicacile - ukumaketha oku-inthanethi kumele kube yingxenye yakho